अमेरिकामा एकैदिन हजारबढिको मृत्यु, सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने ५ देशको नालिबेली ! – Sagarmatha Online News Portal
अमेरिकामा एकैदिन हजारबढिको मृत्यु, सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने ५ देशको नालिबेली !
काठमाडौं । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि अमेरिकामा १ हजार ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोनाको नयाँ संक्रमित पनि अन्य देशको तुलनामा अमेरिकामै सबैभन्दा बढि भेटिएको छ । गएको २४ घण्टाभित्र २६ हजार ४ सय ७३ जना नयाँ संक्रमित भेटिएको छ ।
हालसम्म अमेरिकामा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या २ लाख १५ हजार ३ जना पुगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या भने ५ हजार १ सय २ जना पुगेको छ । ८ हजार ८ सय ७८ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै २ लाख १ हजार २३ जना उपचार गराइरहेका छन् । उनीहरुमध्ये ५ हजार ५ सयको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको बताइएको छ ।
एकैदिन सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशमध्ये दोस्रोमा स्पेन छ । स्पेनमा २४ गएको घण्टाभित्रै ९ सय २३ जनाको मृत्यु भएको छ । भने, नयाँ संक्रमितको संख्या पनि एकैदिनमा ८ हजार १ सय ९५ भेटिएको छ । स्पेनमा हालसम्म संक्रमितको संख्या १ लाख ४ हजार १ सय १८ पुगेको छ । भने, २२ हजार ६ सय ४७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ७२ हजार ८४ जना उपचार गराई रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ५ हजार ८ सय ७२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
त्यसैगरी तेस्रोमा सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देश ईटालीमा ७ सय २७ जनाको पछिल्लो २४ घण्टाभित्र मृत्यु भएको छ । भने, ४ हजार ७ सय ८२ जना नयाँ संक्रमित भेटिएको छ । ईटालीमा हालसम्म संक्रमितको संख्या १ लाख १० हजार ५ सय ७४ पुगेको छ । १६ हजार ८ सय ४७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ८० हजार ५ सय ७२ जना उपचारमा छन् । उनीहरुमध्ये ४ हजार ३५ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
चौथो देश बेलायतमा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र ५ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । भने, नयाँ संक्रमितको संख्या ४ हजार ३ सय २४ जना पुगेको छ । बेलायतमा हालसम्म २९ हजार ४ सय ७४ जना संक्रमित भएका छन् । १ सय ३५ मात्र निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै २६ हजार ९ सय ८७ जना उपचारमा छन् । उनीहरुमध्ये १ सय ५३ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
र पाँचौं देश फ्रान्समा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र ५ सय ९ जनाको मृत्यु भएको छ । भने, नयाँ संक्रमितको संख्या ४ हजार ८ सय ६१ जना पुगेको छ । हालसम्म फ्रान्समा ५६ हजार ९ सय ८९ जना संक्रमित भएका छन् । १० हजार ९ सय ३५ निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ४२ हजार २२ जनाले उपचार गराइरहेका छन् । उनीहरुमध्ये ६ हजार १७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।